Semalt na-akọwa Uru kachasị mma nke Video Marketing
Ulo oru ndi mmadu adighi emeputa onyonyo vidiyo maka ulo oru ha na ntaneti mgbasa ozi. Ndị ọkachamara na Nyocha Search Engine (SEO) na-elekarị vidiyo anya dị ka ihe na-agafe agafe nke na-adịghị mkpa maka ịkwalite ọrụ nke nzukọ ahụ. Ọzọkwa, ndị ọrụ nke ụlọ ọrụ ndị a na-eche na imepụta vidiyo bụ mmemme dị oké ọnụ. E nwekwara egwu na ọtụtụ ndị ahịa nwere ike ghara ile vidio. Echiche ndị a na-ezighị ezi banyere ahia vidio na-emetụta arụmọrụ nke azụmahịa - it security audit company.
Njikwa Ihe Nlekọta Ahịa nke Semalt Digital Services, Michael Brown gosipụtara uru atọ dị na vidio na arụ ọrụ.
Ohere Ohere OZI
SEO bụ atụmatụ dị mkpa nke ịntanetị nke ụlọ ahịa ndị obere na ndị na-ajụ na-eme. Otú ọ dị, ìgwè dijitalụ kwesịrị ịbụ ndị ruru eru n'ihi na ogige SEO dị ike. A na-enyocha iwu nke azụmahịa dijitalụ mgbe niile. Google, igwe nyocha kachasị, na-eme ka usoro nyocha ọhụrụ nke ndị ahịa ahịa dijitalụ ruru eru ghọta. Otú ọ dị, ọ dị mkpa ka ndị ọrụ nke ụlọ ọrụ obere ma ọ bụ nke na-azụ ahịa ghọta na ọdịnaya vidiyo kwesịrị ekwesị nwere ike imezi atụmatụ SEO.
Ihe omimi vidio mejuputara ederede na ihe oyiyi n'ime usoro SEO. O yikarịrị ka a ga-ekekọrịta vidiyo na mgbasa ozi mgbasa ozi (Facebook, WhatsApp, na Instagram) karịa isiokwu ma ọ bụ njikọta njikọta..Onu ogugu di elu na-eme ka ogo SEO di nma ma nye gi ohere igbado ndi ahia. Enwere ike igosi ọdịnaya vidiyo site na iji aha nwere oke okwu dị irè. Ndị ahịa kwesịrị ịzụlite ma jiri ihe omimi vidiyo n'oge usoro SEO na-adọta ndị ahịa ahịa.
Ndị na-azụ ahịa na-azụ ahịa na-azụ ahịa na-eji usoro mgbasa ozi na-emekọrịta ndị ahịa ahụ. Ndị mmadụ na-eji usoro mgbasa ozi na-azụ ahịa ndị ọhụrụ na ndị ahịa. Ndị ọrụ azụmahịa na-enwetakwa nzaghachi dị mkpa gbasara àgwà ngwaahịa ha site na ndị ahịa site na iji nkwurịta okwu mgbasa ozi. Ulo oru ndi na-aga nke oma aghaghi igbasa ihe omuma ahia obula mgbe nile ma zaa n'ajua na ajuajua nke ndi neso uzo.
Ịmepụta ọdịnaya vidiyo na mgbasa ozi mmadụ, ozi ịntanetị, na ebe nrụọrụ weebụ nke ụlọ ọrụ ahụ na-eme ka atụmatụ SEO dịkwuo mma, na-eme ka echiche mara mma, ma na-azụ ndị ahịa ahụ. Site na ịdebe vidio na mgbasa ozi mmadụ, azụmahịa na-emepe ahịa ahịa maka ịkekọrịta. Ọnụ ọgụgụ dị elu na-eme ka oyiyi ahụ na ụdị ahịa ahụ dịkwuo mma, karịsịa ma ọ bụrụ na vidiyo ahụ malitere ịmalite.
Ịzụ ahịa Ngwaahịa na Ọrụ
Ihe omimi vidiyo bu ahia ahia na ire ere. N'iji vidio mee ka azụmahịa na ịdekọ vidio na ozi ịntanetị na-eme ka atụmatụ ụlọ ahịa ahụ dịkwuo mma. Ndị ahịa ahịa dị oke ahịa na-aghọta na mkpebi nzụpụta nke ndị ọrụ ịntanetị na-emetụta usoro nzụlite. Ndị na-ere ahịa na ndị njikwa kwesịrị ịghọta na ịzụlite na-eduga ihe dị ka pasent 20 ọzọ karịa ahịa ndị na-azụghị. Njide ọdịnaya vidiyo na-eduzi ndị na-eduga ime mkpebi ịzụta. Dịka ọmụmaatụ, mmepe ngwaahịa nwere ike melite ahịa site n'igosi uru nke ngwaahịa nye ndị ahịa a na-eche.
Vidio ahụ bụ nnukwu ụdị ọdịnaya, na-ejikọta na ebe nrụọrụ weebụ. Ya mere, ọ dị mkpa iji vidiyo maka ire na iduzi usoro nurturing. Inye ego n'ime ihe omimi vidio maka SEO na ahia ahia ahia bu otu n'ime mkpebi kacha mma nke onye oru ahia ma obu onye ndu ahia nwere ike ime.